कुरा मान्ने ! कुरै नमान्ने रे !! – Nepal Japan
कुरा मान्ने ! कुरै नमान्ने रे !!
नेपाल जापान ३० फाल्गुन १५:३४
कोही भन्छन् मलाई भनेको साह्रौ मान्छ, कुरा मान्छ- कसैले भन्छन् मलाई भनेको मान्दै मान्दैन, कुरा मान्दैन । आख़िर यो कुरा मान्ने भनेको के रहेछ, कुरा नमान्ने भनेको के रहेछ त ? यसो शब्दका मर्म, भाबनाव लुकेका अर्थ सबै केलाउन मन लागेर आयो आज ।
म बच्चा हुँदा (१-२ वर्ष) हजुरबुबा, हजुरआमा लगायतका सम्पूर्ण आफन्तजन, छरछिमेकीहरुले मलाई साह्रै कुरा मान्ने भन्नुहुन्थ्यो रे । मलाई बाल्यकालको स्मरण कम मात्र भएकाले त्यो बेला कसले किन कुरा मान्ने भने थाहा नै भएन ।
समय बित्दै गयो ४-५ वर्षको भएँ । त्यो बेलाका यादहरु अलि अलि यो मानसपटलमा छ । कुनैका नजरमा कुरा मान्ने भएछु, कसैका नजरमा कुरै नजान्ने भएछु । अलि अलि बुझेको हो की जस्तो पनि लागिरहेको थियो ।
अनि ९-१० वर्षतिर होला, घरका आफन्तहरु मात्रै हुँदा कुरा नमान्ने, पाहुना अर्थात् बाहिरका मानिसहरु आउँदा कुरा मान्ने भएछु । घरमा आफन्तजन मात्र हुँदा हजुरबुबा, हजुरआमाले बाबु यसो गर्नुपर्छ, यस्तो खानुपर्छ, योसंग घुम्नु पर्छ, योसंग घुम्नु हुँदैन लगायतका कुराहरु गर्नु हुन्थ्यो । प्रायःजसो कुरै नमान्ने, यो गर, त्यो गर भन्ने कुरा हुन्थे ।
तर जब घरमा अरु कुनै पाहुना, बाहिरका मानिसहरु आउथे । अघिका कुराहरु उल्टिन्थे । हाम्रो बाबुले यसो गर्छ, यस्तो खान्छ, यसरी घुम्छ, भनेको मान्छ, ज्ञानी छ । अर्थात् कुरा मान्छ भन्ने शब्दहरु बढ़ी प्रयोग हुन्थे ।
९-१० बर्षबाट अलि अलि थाहा पाउन थाले । एउटै कुरा हो तर यो बेलामा यसो त्यो बेलामा त्यसो भनेको जस्तो । त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिले गर्दा कुनै दिन कुरा मान्ने बनाइदिन्छन्, कुनै दिन कुरै नमान्ने । त्यो बेलाबाट किन रैछ भनेर यसो खोजी गर्न मन लागिरहेको थियो । हाम्रो समाजमा आफ्नालाई राम्रा र अरुलाई नराम्रा भन्ने चलन भएर पो हो कि जस्तो पनि लाग्यो । अनि देखाउने प्रकृत्तिले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ ।
हुन त आफ्नालाई राम्रो देखाउन खोज्नु नराम्रो कुरा पटक्कै होइन तर त्यस्ता क्रियाकलापले ती आफ्नालाई कस्तो प्रभाव पार्छ होला त ? सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्यो । फेरी नराम्रोलाई राम्रो देखाउनु पर्छ भन्न खोजेको छैन है । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रो लाई नराम्रो भन्दा कसो होला ? त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासलाई कति कुन भनाइले सहयोग गर्ला त ?
बाँटो बिराएको मान्छेलाई त्यो बाँटो सही छ भन्नु राम्रो होला त ? पटक्कै हुँदैन मेरो सोचाइमा । त्यसैले बाल्यकालदेखि नै कसैको अगाड़ी मान्ने बनाइदिने , कसैको अगाडि नमान्ने बनाइदिने चलन त्याग्नु नै राम्रो हो की ??
बेमौसमी विपद : जलवायु परिवर्तनको असर की भैपरी आउने घटना ?
भारतीयले शहरका गल्लीगल्ली पुर्याउने सेवा हामीले गरे…
थाहा पाउँ न श्रीमान् !
दुर्गाकवच पाठ आफ्नै शरीरका अंगहरुको रक्षाका लागि